Teacup Yorkie: Waxa La Ogaado Kahor Iibsiga - Taranka
Teacup Yorkie: Waxa La Ogaado Kahor Iibsiga
Teacup Yorkies aad ayey u yaryihiin waxay si fudud ugu habboonaan karaan calaacasha gacantaada.
In kasta oo cabbirkoodu si aad u qurux badan u qurux badan yahay haddana dabeecadoodu way dhib badan tahay.
Waxay leeyihiin xariiq adag oo madax adag waxayna leeyihiin dabeecad jilicsan sida Terrier kasta .
Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyadan oo ay ka mid yihiin sida ay u dalban karaan kooxahan la jecel yahay inay noqon karaan iyo sida habboon ee iyaga loogu daryeelo ...
Teacup Yorkie Jaleeco
Guudmarka Teacup Yorkie
Imisa Ayuu Ku Baxayaa Tacliinta Yorkie?
Muuqaalka Terrier-ka Mini Yorkie
Tilmaamaha Daryeelka Teacup Yorkie
Sida Loo Tababaro Shaaha Yorkies
Teacup Yorkie waa nooc aad u yar oo leh shakhsiyad geesinimo leh oo feyig ah taas oo ka dhigeysa inay ka weyn yihiin nolosha.
Kooxahan yar yar ayaa kalgacal iyo kalgacal la leh dadka ay jecel yihiin laakiin wax yar ayay shaki gelin karaan shisheeyaha. Way macaan karaan laakiin yaan lagu kadsoomin maxaa yeelay xoogaa dabeecad ayey yeelan karaan. Isku soo wada duuboo Mini Yorkie ayaa wehel fiican u samaysa qoysaska hal qof halkaas oo ay ku halaagsami karaan.
Caannimada: # 10.
Gaarka ah: Wehel
Miisaanka: 2-4 rodol.
Qiimo: $ 1200- $ 2000.
Shakhsiyadda: Kalgacal, geesinimo leh oo dalbanaya.
Qiimo : $ 750- $ 1000
Nolosha qofka : 12-15 sano
Cabir : 8-10 rodol
Daadiyay : Hoose / Dhexdhexaad
Waxqabadka : Hoos
Qiimo : $ 800- $ 1500
Cabir : 13-22 rodol
Qiimo : $ 1200- $ 2000
Nolosha qofka : 7-9 sano
Cabir : 2-4 rodol
Daadiyay : Hoos
Teacup Yorkie waa nooc yar oo ka mid ah kuwa caanka ah ee Yorkshire Terrier.
Saxiibadan yar yar waa nooc caruusad ah oo aad ugu habboon ku fadhiisashada dhabta dhabta ah ee milkiilahooda marka loo eego ugaarsiga jiirka sida Terrier dhaqameedka.
Waxay yihiin kuwo aan la dafiri karin oo qurux badan oo kuwan yar yar waxay kufiicnaan karaan baabacada gacantaada. Waxay leeyihiin indho jilicsan oo bunni ah iyo dhogor qurux badan oo ka dhigi doonta qofkasta inuu jacayl ku dhaco.
In kasta oo ay yar yihiin ardaydan xiisaha leh waxay leeyihiin shakhsiyad geesinimo leh iyo xoogaa madax adag. Tababbarku wuu adkaan karaa maxaa yeelay eeyahaani ma jecla in loo sheego waxa ay sameynayaan.
Marka lagu daro tababarka eeyahaani waa dayactir aad u sarreeya waxayna u baahan yihiin daryeel tayo leh.
Cuntooyinkoodu waa kuwo gaar ah oo jadwalkooda joogtada ah wuxuu u baahan yahay mid taxaddar leh.
Waxay sidoo kale aad u baahan yihiin marka la eego feejignaanta. Kuwani caruurtu ma jecla inay nala wadaagaan iftiinka oo had iyo jeer waxay rabaan in indhaha oo dhan la saaro iyaga. Sidoo kale uma dulqaadan inay la wadaagaan jacaylka aadanaha ay jecel yihiin qof kale.
Aad u jecel oo daacad ah.
Ha u baahan jimicsi badan.
Ku habboon guryaha.
Xajmiga yar ayaa ka dhigaya kuwo si fudud loo xanaaneyn karo.
Way ku adag tahay in guriga la siiyo.
Taranka liita wuxuu u horseedi karaa xaalado caafimaad oo badan.
Ka hinaasi doonaa xayawaanka kale.
Dagaal ku noqon kara shisheeyaha.
Waxaad kudhowaad damaanad qaadi kartaa in markaad toosto subaxda Teacup Yorkie-kaaga lagu dhajin doono dhinacaaga.
Markay ogaadaan inaad soo jeeddo waxay kugu shubi doonaan dhunkasho waxayna diyaar u yihiin inay bilaabaan maalinta.
Eeyadan yar yar ee kalgacalka leh waxay rabaan inay waqti badan ku qaataan dhabtaada sida ugu macquulsan sidaa darteed u diyaar garow inaad cuncunto cunugaaga intaad ku shubayso kafeegaaga subaxa, quraacda iyo xitaa intaad shaqada u diyaar garoobeyso.
In kasta oo aad weli daalan tahay waa inaad ka taxaddartaa halka aad u dhaqaaqayso. Waxay u badan tahay inay cagahaaga dhex mari doonaan cagahaaga markaad socotaan si aad u hubiso inaadan ku tuman!
Waxay u baahan doonaan cunto aad u yar subaxdii ka dibna waxay u baahan doonaan in la quudiyo 3-4 saacadood kasta. Fikrad ahaan waxaad ka shaqeysaa guriga maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa inaad qaadatid nasasho badan inta lagu jiro maalinta si aad u siiso cunuggaaga cunto yar oo fudud.
Nasiib wanaag qashinkaaga ma carqaladeyn doono maalintaada shaqada inta badan inuu jimicsi sameeyo ama ciyaaro. Waxay u badan tahay inay noqon doonaan kuwo dheel dheel iyo firfircooni leh markaad subaxdii isu diyaariso laakiin markaa si farxad leh ayey u daawan doonaan daaqadda dhinacaaga ah markaad shaqeysid, iyagoo sugaya inaad ku qeyliso wax kasta oo dhaqaaqa.
Haddii saaxiibbadaa ay ka gudubto Teacup Yorkie-gaaga waxaa laga yaabaa inay yeeshaan xoogaa dabeecad ah. Waxay u badan tahay inay marka hore yara istaagi doonaan asxaabtaada ka dibna xitaa laga yaabo inay ka hinaasaan haddii ay ku qabtaan adiga oo siinaya asxaabtaada ixtiraam ka badan iyaga.
Kuwani caruurtu ma jecla inay la wadaagaan jacaylka qofka ay jecel yihiin.
Dhamaadka maalin dheer waxaad ka heli doontaa ardaygaaga oo si farxad leh ugu dhegan dhabtaada.
Waxay si xiiso leh kuugu raaci doonaan sariirta oo ay nastaan ​​si ay ugu soo celiyaan wareegga mar labaad.
Terry Yorkshire asal ahaan waxaa lagu cuni jiray Waqooyiga England 1870-yadii.
Kooxahan waxaa loo sameeyay ujeedka jiirka oo macnaheedu yahay in jiirka iyo cayayaanka laga saaro miinooyinka iyo warshadaha dharka.
Jirkooda yar yar ee isboortiga iyo dareenka dareenka leh ayaa ugu fiicnaa ugaarsiga. Tani waa nooc adag, shaqo adag oo qabsan kara noole kasta oo yar oo ku qulqula safka aragooda.
Ugu dambayntii maalqabeennadii hodanka ahaa iyo kuwii gobta ahaaba waxaa ku dhacay quruxda noocyadan oo waxay u beddeleen kuwo ladogyo ah oo xarrago leh halkii ay ka noqon lahaayeen eeyo shaqeeya oo qalbi furan. Noocan casriga ah wuxuu aakhirkii u gudbay Mareykanka 1880-meeyadii halkaas oo ay si deg deg ah uga noqotay mid ka mid ah noocyada ugu caansan agagaarka.
Markii ay soosaarayaashu arkeen caan ka ahaanshaha noocani waxay si dhakhso leh u bilaabeen inay soo saaraan tiro iyo cabirro kala duwan.
Mid ka mid ah kuwan la qabsashada wuxuu ahaa Teacup Yorkie oo noqotay mid sii kordheysa tan iyo bilowgii qarniga.
Sida teacup eeyaha kacay Yorkshire Terrier waxaa si dhakhso leh u dhumay by soosaarayaasha.
Kuwaas soosaarayaasha ah waxay doorteen qashin qashin ah waxayna isla jaan qaadeen si ay u soo saaraan farac yar.
Nasiib darrose ardaydan yaryar waxay soo saareen xaalado caafimaad oo badan waxayna ku noolyihiin nolol aad u gaaban marka loo eego waalidkood daahir.
Teacup Yorkies iyo noocyo yaryar oo yaryar ayaa si aad ah uga codsanaya aadanaha fikrad la yiraahdo neoteny . Neoteny waa haynta astaamaha dhalinyarada ee da'da weyn. Muuqaalkani wuxuu innaga bani aadamnimada ku yeelanayaa dareenno hooyo iyo daryeel adag oo ku saabsan noolahaas - hidde-sideena ayaa ah inaynu jeclaano kuwan yar-yar ee yar yar.
Nasiib daro in noocyo badan oo ka mid ah macallimiinta loo yaqaan 'teaup' ayaa inta badan si anshaxdarro ah loo dhalaa iyada oo loo marayo taranka qashinka. Eydan yaryar ayaa sida caadiga ah aan caafimaad qabin waxayna soo saaraan eeyo yaryar oo la il daran xaalado caafimaad oo kala duwan.
Badanaa waxay si xoog leh ugu xirmaan hal xubin oo reer ah inta kale. Waxay jeclaan doonaan qof walba oo ka tirsan qoyskooda hase yeeshe xitaa waxay ku xirnaan doonaan hal qof.
Kuwani ardayda wanaagsan ayaa sameeya eeyaha daaweynta fiican sumcaddooda eyda dhabta ah darteed.
Teacup Yorkies badanaa waxay ku dhashaan madow oo leh astaamo yar oo bunni ah laakiin midabka jaakadoodu wuu is badalaa waqti ka dib. Suuradooda ayaa laga yaabaa inay noqdaan midab buluug ah, waxay yeelan karaan calaamado badan ama waxay sii ahaan karaan madow.
Noocani wuxuu jecel yahay inuu hoos jiifo busteyaal markaa hubi inaad hubiso sariirtaada ka hor intaadan jiifsan!
Noocani wuxuu caan ku yahay dabeecad jacayl xad dhaaf ah.
Kuwani waxay dalbadaan jacayl waqti kasta laakiin si farxad leh ayaan kuuguugu abaalgudi doonaa dhunkasho iyo laablaabasho. Baahida joogtada ah ee ay u qabaan fiiro gaar ah waxay u keentaa inay ku horumariyaan hinaase xagga eey ama qof kale oo ka qaada jacaylka aadamaha ay jecel yihiin.
Sababtoo ah waxay ubaahan yihiin jacayl wakhti kasta ma jecla in keligood lakala tago. Badanaa waxay yeeshaan walaac kala tag ah waxayna aad u xanaaqayaan haddii keligood looga tago gurigooda. Nasiib wanaag cabbirkooda yar ayaa ka dhigaya kuwo aad loo qaadi karo sidaa darteed waxaad ku qaadan kartaa ficil ahaan meel kasta oo aad tagtid.
Jacaylka daran ee ay u qabaan qoysaskooda sidoo kale waxay u horseedaa dabeecad aad u ilaaliya. Kooxahani waa kuwo aad daacad u ah waxayna eryi doonaan shisheeyaha iyo xayawaannada kale si ay reerkooda ugu nabad galaan (haddii aad rabto iyo haddii kaleba). Waxay sidoo kale isticmaal jilifkooda yappy inuu kaaga digtoonaado khatar kasta oo dhici karta.
Dhowristaani waxay u horseedi kartaa arrimaha qaarkood.
Waxay had iyo jeer la dagaallami doonaan shisheeyaha ama eeyaha kale sidaa darteed waxay u baahan yihiin is dhexgal ballaadhan da'da hore si loola dagaallamo dhaqankan.
Yaryar Yorkies sidoo kale waxay u nugul tahay inuu yeesho cillad yar oo ey.
Kani waa erey loo adeegsado marka eey aad u yar uu noqodo mid aad u kacsan isla markaana madax ah maxaa yeelay milkiilayaashooda ayaa aad u baabiiya. Shakhsiyadani waa mid caan ku ah noocyada Terrier-ka ee loo yaqaan dabeecad geesinimo leh.
Way yaryihiin laakiin caruurtani waxay leeyihiin xirmooyin tamar ah oo ku urursan jirkooda yaryar. Teacup Yorkies waxay kaliya ku dadaali karaan waqti gaaban, laakiin markay sameeyaan, iska ilaali. Waxay ku dhex wareegi doonaan wareegyada guriga waxayna si kaftan ah u weerari doonaan alaab kasta oo la siiyo.
In kasta oo ay noqon karaan qaar xoogaa nasasho ah mararka qaarkood ciyaalyadan waxay had iyo jeer kugu ilaalin doonaan inaad si fiican u maaweeliso. Waxay leeyihiin shaqsiyaad goouf ah waxayna jecel yihiin inay galaan xumaan taas oo kugu sababi karta murugo marka hore laakiin waxay u badan tahay inay kuu horseedo qosol badan.
Ciyaalkan waxay leeyihiin dareen weyn oo qibrad leh waxayna si farxad leh kuugu wehelin doonaan safar kasta oo aad gasho.
Maaddaama Teacup Yorkies ay hadda dalbanayaan waxaad filan kartaa inaad bixiso $ 1200- $ 2000 eey ah.
Ey $ 1200- $ 2000
Dadka waaweyn $ 800- $ 1000
Korsasho $ 50- $ 300
Tixgeli helitaanka cabirka caadiga ah Yorkie halkii Teacups badanaa ay horumarin karaan dhibaatooyin caafimaad oo fara badan sababo la xiriira dhaqannada taranka ee anshax darrada ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad Teacup Yorkie ka iibsato abuure ka dibna waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaanno badan si aad taas u caddeyso abuurkaagu waa sumcad wuxuuna adeegsadaa dhaqan anshax leh.
Kaliya soo iibso Teacup Yorkie haddii aad waqti badan u huri karto si aad u siiso feejignaan joogto ah iyo cunno soo noqnoqda.
Kuwani ardaydu waxay ku kacaan lacag aad u fara badan laakiin waxay sidoo kale urursan doonaan biilal badan oo xoolaha ah markay gaboobaan sidaa darteed hubso inaad miisaaniyad u sameysid si waafaqsan.
Ka taxaddar taranka this haddii aad leedahay carruur yaryar. Carruurta yaryari waxaa laga yaabaa inay si qalad ah ugu tumaan iyaga oo ay u dhaawacaan isir jilicsan.
Teacup Yorkies waxay ubaahantahay isdhexgal badan si ay ulaqabsadaan dadka cusub iyo eeyaha kale sababtoo ah dabeecaddooda difaaca.
Haddii aad leedahay xayawaano kale kani ma aha nooca aad adigu iska leedahay. Iyagu si hufan ayey u hinaasaan mana ku farxi doonaan haddii aad jacaylkaaga oo dhan u siiso eey kale.
Eydan dhallinta yar waxay leeyihiin astaamo yar yar oo hareeraha ka jira.
Madaxooda yar-yar ayaa wareegsan oo lagu xardhay af-gaaban. Lugahooda yar xitaa way ka gaabi karaan dabadooda. Waxay si sharaf leh dusha uga hayaan dabo qurxoon jidhkooda iyagoo sanka badhanka cute ka haya hawada.
Teacup Yorkies waxay leeyihiin indho diirran oo bunni ah oo dhalaali kara qof walba qalbigiisa, laakiin feejignaantooda iyo dhegaha kacsan ayaa qof walba xusuusinaya in ilaaladaas yar ay yihiin kuwo aad u ilaaliya oo dhulal ah.
Teacup Yorkies waa mid ka mid ah noocyada ugu yar jiritaanka jiritaanka.
Kuwani yaryar waxay culeyskoodu yihiin 2-4lb.
Oo waxay taagan yihiin oo keliya 5-7 inji dherer.
Hubso inaad daawato talaabadaada maadaama eeyahaani yaryari socon karaan adigoon xitaa dareemin.
Waxaa jira afar isku midab oo caan ah oo loogu talagalay Teacup Yorkies:
Madow iyo dahab
Buluug iyo dahab
Buluug iyo cagaar
Dhammaan midabada jaakadu waxay leeyihiin midab madow oo sal leh oo leh dhejisyo midab khafiif ah oo dhibco ku wada leh jirkooda yar.
Ciyaalyahannadan ayaa caan ku ah dhogorta sharafta leh.
Waxay leeyihiin timo dhaadheer oo ruxruxaya oo qulqulaya jidhkooda waxayna taaban karaan sagxadda dhulka haddii aan laga hortagin.
Qufulladan quruxda badani waa xariir waxayna leeyihiin muuqaal dhalaalaya sida haddii ay heleen daaweyn qaboojiye oo qoto dheer. Milkiilayaasha qaar waxay doorbidaan inay yareeyaan timahooda dhaadheer si ay qurxinta uga dhigto mid la maareyn karo laakiin kuwa kale waxay doorbidaan boqortooyada aura ee dhogorta dheer iyo xarrago leh.
Marka lagu daro muuqaalka quruxda badan ee dhogorta caruurtooda dhif ayey daadiyaan (iyagu waa loo arko inay tahay hypoallergenic ).
Yorkaciyada Teacup waa nooc aad u baahan oo u baahan daryeel gaar ah.
Waxay ubaahan yihiin qurxin taxaddar leh iyo jadwal quudin oo aad u adag si ay u farxaan. Nasiib darrose sidoo kale waxay leeyihiin suurtogalnimo sare oo ah inay horumariyaan xaalado caafimaad oo kala duwan. Ciyaalyahannadan ayaa sida caadiga ah lagu soo barbaaray si anshax-darro ah sidaa darteedna inta badan way jiran yihiin waxayna ku noolaadaan nolol gaaban.
Qaybta ugu fudud ee daryeelkoodu waa in eeyadan dayactirka sare leh ay leeyihiin baahiyo jimicsi oo aad u hooseeya oo aysan u baahnayn dhaqdhaqaaq badan maalin kasta.
Cunugani maahan kuwa bilowga ah wuxuuna u baahan yahay daryeel tayo sare leh.
Teacup Yorkies waxay leeyihiin tamar badan laakiin mahaddii waxay si fudud ugu daali karaan xoogaa jimicsi ah.
Waxa kaliya ee ay qaadan doontaa waa 20-30 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta iyo 1-2 socod gaaban ah.
In kasta oo aysan u baahnayn waqti badan oo ciyaar maalin kasta haddana waxaa muhiim ah inaad weli mashquuliso.
Laba waxyaalood oo muhiim ah in la xasuusto markii la jimicsanayo. Ugu horreyntii waa inaad si aad ah uga taxaddartaa jirkooda jilicsan. Ha u oggolaan inay ka soo boodaan meelaha dhaadheer oo ay hubiyaan inaadan ku tuman adigoo ordaya. Marka labaad, bilaha jiilaalka ee qabowga hubi inaad ku duubto saaxiibkaa yar jaakad diiran markaad dibadda u bixinayso.
Haddii ardaydan xunxun ay caajisaan waxay cuni doonaan kabo, fiilooyin iyo wax kasta oo ay ku ridi karaan ilkahooda yar. Gurigaaga ka buuxi alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo xitaa tixgeli inaad hesho quudiyayaal xujo ah si ay uga hortagaan maskaxdooda yar.
Xitaa waad awoodaa baro tabo cusub si ay maskaxdooda u mashquusho.
Maaddaama ay u nugul yihiin burburka tracheal-ka waxaa lagugula talinayaa inaad u iibsato suunka ardaygaaga.
Suunka ayaa culays aad u yar ka saari doona cunahooda.
Wadarta Waxqabadka Maalinlaha: 20-30 daqiiqo.
Heerka Waxqabadka: 2/5.
Jadwalka qurxinta ee Teacup Yorkie ayaa xoogaa caajis ah.
Kuwani caruurtu waxay leeyihiin qufulo dhaadheer oo soo qulqulaya sidaa darteed waa in si wanaagsan loo jarjaro loona qurxiyo badanaa.
Haddii aad u ogolaato timaha eeygaaga inay soo baxaan waxay u badan tahay inuu kori doono dherer dherer ah waana inaad jiido timo kasta oo siyaado ah oo korka madaxooda ah si aad uhesho timo si ay uga ilaaliso indhahooda. Waxay u baahan doonaan in la cadeeyo maalin kasta si ay iskaga ilaashadaan dhaldhalaalka dhogorta waxayna u baahan doonaan inaad soo booqato muraayad dhawrkii biloodba mar si aad u xajisid dhogorta quruxda badan.
Ikhtiyaarkaaga kale ayaa ah inaad iyaga siiso goyn yar.
Qaabka timahaan waxaa sameeya nin wax hagaajiya wuxuuna ku hayaa dhogorta cunugaaga dherer aad u gaaban. Halkii aad ka cadayi lahayd maalin kasta waxaad u baahan tahay oo keliya inaad cadayato ilmahaaga usbuucii laba jeer mana u baahnid inaad safarro badan ku tagto agooraha.
Waa in la maydhaa bishiiba mar, in musmaarradooda la jaro bishiiba hal jeer oo waa in dhagaha la nadiifiyaa toddobaad kasta. Intaas waxaa sii dheer waa inaad cadayashada ilmahaaga maalin kasta maaddaama noocyada carruurtu ku ciyaaraan ay aad ugu nugul yihiin arrimaha ilkaha.
Eeyahaas la jeclaan karo waxay u baahan yihiin jadwal quudin gaar ah.
Cuntada ay u baahan yihiin maahan mid gaar ah laakiin caruurtani waxay u baahan yihiin in la quudiyaa 3-4 saacadood kasta. Iyaga u nugul inuu yeesho hypoglycemia f (sonkorta dhiigga oo hooseysa) sidaa darteed waxay u baahan yihiin in badanaa la quudiyo si ay sonkorta dhiigoodu kor ugu sii socoto.
Mulkiile Teacup Yorkie ah waxaa ugufiican in maalgashi lagu sameeyo shey toos ah.
Haddii aadan ka taxaddarin inaad quudiso inta badan waxay yeelan karaan arrimo la xiriira sonkorta dhiiggooda oo waxay la kulmi doonaan suuxdin.
Maaddaama ay calooshaas yar yihiin uma baahna cunto badan gabi ahaanba.
Qiyaastii ilaa 160 kaloori maalin kasta (½cup) ayaa kugu filnaan doona.
Cuntadaasi waa inay ku yaraato dufanka iyo kalooriyada oo ay lahaadaan qadar dhexdhexaad ah oo borotiin ah si ay u taageeraan horumarka lafaha caafimaad qaba.
Nasiib darrose waa inaad ka fileysaa inaad safaro joogto ah ugu tagto dhakhtarka xoolaha haddii aad qaadato Teacup Yorkie maxaa yeelay cabirkooda yar badanaa caafimaad ahaan wuu u xun yahay.
Taranka anshax darrada awgeed waxay la il daran yihiin xaalado caafimaad oo badan.
Bixiyeyaashu badanaa waxay qaataan cunnooyinka ugu yar ee qashinka oo wada dhala. Tani waxay soo saartaa eeyo aad u daciif ah oo jiran kuwaas oo haysta fursad yar oo badbaado. Markaad hoos u dhigto eey yar oo si aan caadi aheyn u yar waxaad sidoo kale hoos u dhigeysaa dhammaan xubnaha muhiimka ah iyo qeybaha jirka oo aan sidoo kale u shaqeynaynin.
Dhibaatooyinka wadnaha iyo dhibaatooyinka beerka ayaa ah arrin aad u daran oo ku saabsan eeyadan yaryar. Kala-baxa beerka ayaa aad u badan taas oo keenta in beerka uusan kala sifeynin sunta dhiiga ku jirta.
Cunugyadan liita ayaa sidoo kale laga yaabaa inay yeeshaan jabka lafaha ka soo boodka meelaha dhaadheer sidoo kale.
Dabcan maahan in Teacup Yorkie kasta ay horumarin doonto xaaladahan laakiin cabirkooda yar ayaa ka dhigaya kuwo u nugul arrimahaan caafimaad.
Immisa Ayuu Teakup Yorkie Noolaanayaa?
Nasiib daro maadaama ay had iyo jeer la il daran yihiin xaalado caafimaad oo badan ardaygaagu wuxuu u badan yahay inuu noolaado 7-9 sano oo keliya.
Teacup Yorkies waa kuwo aad u caqli badan waxayna noqon karaan kuwa dhaqso wax ku barta laakiin dabeecad xumadooda ayaa badanaa caqabad weyn ku noqon karta milkiilayaashooda jahwareersan.
Kuwani caruurtu ma jecla in loo sheego waxa ay sameynayaan gaar ahaan sifiican ugama jawaabaan ciqaabta adag.
Iyagu waa nooc aad u xasaasi ah waxayna u baahan yihiin dhiirigelin badan iyo daaweyn badan si xitaa looga fikiro in la sameeyo waxa aad ka codsato iyaga. Xoojinta wanaagsan waa ikhtiyaar keliya oo leh noocaan . Erey kasta oo qallafsan wuxuu ku keenayaa inay xidhaan oo ay iska indhatiraan wax kasta oo aad tidhaahdo.
Tababbarka dheriga ayaa laga yaabaa inuu noqdo waxa ugu adag ee aad ku wajahdo milkiile Teacup Yorkie.
Eeyadan xasaasiga ah waxay leeyihiin kaadiheysta yar yar iyo dabeecad joogta ah sidaa darteed waa inaad dulqaad yeeshaa inta lagu jiro tababarka dheriga. Ha lumin rajada.
Haddii aad awoodo inaad ka guuleysato dabeecadooda markaa Mini Yorkie Terriers waxay noqon kartaa arday deg deg ah.
Bulsheynta ayaa muhiimad gaar ah u leh isirkan - waxay aad u ilaaliyaan qoysaskooda waxayna u noqon karaan dagaal ku socda shisheeyaha iyo eeyaha kale.
Way qaniini karaan ama nuujin karaan haddii ay dareemaan hanjabaad waxayna u badan tahay inay u ciyi doonaan oo ku oori doonaan dadka cusub.
Si looga fogaado dhaqankan cadaawada leh u muuji ilmahaaga dad iyo duunyo badan da 'yar. Eygaaga 'yar' waa inuu la macaamilaa dad da 'kala duwan leh waana inuu la ciyaaraa eeyo leh cabbirro kala duwan.
Teacup Yorkies way awoodaa wehel weyn yeelo dadka waaweyn ee keligood ah ama qoysaska leh carruurta waaweyn.
Kuwani caruurtu ma qaataan boos badan umana baahna jimicsi fara badan - waxay kaliya rabaan jacayl iyo kalgacal joogto ah.
Xusuusnow in kasta oo muuqaalkoodu yahay mid ilaalin kara oo laga yaabo inuu dagaal ku noqdo shisheeyaha ama eeyaha u dhowaada kuwa ay jecel yihiin.
Nacasnimadoodu waxay ka muuqan kartaa xaaladaha kale sidoo kale - gaar ahaan inta lagu jiro tababarka!
In kasta oo cabbirkooda yar uu noqon karo mid si aan la rumaysan karin uur-ku-jir ah oo cabbirka noocan oo kale ahi u horseedi karo welwel caafimaad oo kala duwan.
Markaad eegto walaacyadan caafimaad waa inaad tixgelisaa heerka caadiga ah ee Yorkshire Terrier oo leh dhammaan astaamaha lagu farxo ee noocyadan oo ku jira xirmo aad u ballaaran.
Noosoo sheeg qeybta faallooyinka ee hoose ...
waa maxay bulldog yar
waa maxay adhijir shiiloh lagu daray
waa maxay adhijir Jarmal ah oo saable ah